အခမဲ့ CRM ကို LinkedIn နှင့် Diigo တို့ဖြင့်တည်ဆောက်သည်
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 18, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Yahoo! သူတို့ရဲ့အသုံးဝင်ဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်ဖြစ်တဲ့ Delicious ကိုငါဆွဲထည့်လိုက်သည် ငါ့အလိုရှိသမျှ Delicious တင်ပို့ ချစ်သူ Diigo သို့သူတို့ကိုငါတင်သွင်း။ အလေးအနက် Yahoo! အဘယ်ကြောင့်အရသာမရောင်း?
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... Diigo ကို install ပြီးတဲ့နောက်ငါ Chrome အတွက် Diigo extension ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်သွားချိန်တွင် ... စာမျက်နှာများ၊ Bookmark စာမျက်နှာများကိုသီးခြားမှတ်သားထားနိုင်ပြီးသီးခြားမှတ်သားထားနိုင်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့စာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်စုများကိုချန်ထားနိုင်သည် ... အားလုံးသည် Chrome လိပ်စာဘားရှိအသုံးဝင်သောခလုတ်မှဖြစ်သည်။ ဝိုး!
ငါ၌ဤအကြံအစည်ကိုအတော်အတန်သိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုယနေ့အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ငါ LinkedIn ကိုပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်လှစ် (ငါ၏ Patric Welch ကောက်ယူ Noobie.com။ ငါ သီးသန့်ဖြစ်သည် Patric ၏ပရိုဖိုင်းကို tag လုပ်ပြီး linkedin tag ကိုထည့်သည်။
မှတ်စု: ငါ LinkedIn က URL ကိုထည့်သွင်းသော querystring ကင်လုပ်ခိုင်းကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။
ငါထို့နောက်ရေးသားခဲ့သည်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ ကိုယ်ပိုင် Patric's LinkedIn စာမျက်နှာရှိ Diigo မှတ်စု:
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတာပဲ ... အခုငါ Patric ရဲ့ profile ကိုပြန်သွားတဲ့အခါငါရေးခဲ့တဲ့မှတ်စုတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်အပြင် LinkedIn tags များကို Diigo အတွင်းမှဖတ်ရှုနိူင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကသင်၏ CRM အချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်မတည်ငြိမ်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ LinkedIn သည်၎င်း၏ URL ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ Diigo သေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အကြားရှိအရာများသည်မှားယွင်းသွားနိုင်သည်။ ငါတကယ်သုံးဖို့ဒီရိုးရှင်းတဲ့ CRM ကိုရှာဖို့ကြိုးစားစဉ်မှာဒါကကြီးမားတဲ့ hack တစ်ခုပါ။ LinkedIn နဲ့အလုပ်လုပ်စရာလည်းမလိုပါဘူး။ Twitter နဲ့ Facebook တို့လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Tags: အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုindy ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်google ရှာဖွေရေး algorithmထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း